Ninkii "maleegay" weerarkii makhaayadda Bangaladhesh oo la dilay - BBC News Somali
Ninkii "maleegay" weerarkii makhaayadda Bangaladhesh oo la dilay
Image caption Dadka deegaanka Narayanganj oo daawanaya hawlgalka booliiska
Booliiska dalka Bangladesh ayaa sheegay in ay dileen ninkii looga shakisnaa in uu maleegay weer hore oo ka dhacay kafateeriyo ooay ku dhinteen 22 ruux.
Arrintaas ayaa dhacday kaddib markii ay booliisku weerareen meel uu gabaad ka dhiganayay oo u dhaw magaalada Dhaka.
Sanwar Hossain oo ah sarkaal sare oo booliis ah ayaa sheegay in uu "dhintay" Tamim Chowdhury oo ah nin Bangaladhesh u dhashay oo haysata dhalashada Canada, kaas oo lagu tuhunsan yahay in uu ka dambeeyay weerarkaas hore.
Saddex ruux oo kale oo looga shakisan yahay in ay malayshiyo yihiin ayaa la dilay intii uu socday hawlgalkii booliska.
Weerarkii ka dhacay makhaayadda Dhaka ku taalla ayaa bilawday 1 bishii todobaad.
Dadkii weerarkaas gaystay ayaa macaamiishii makhaayadda afduub u haystay muddo 12 saac ah, balse booliiska ayaa weerar ku qaaday oo soo badbaadiyay 13 ruux iyaga oo dilay lix ka mid ah dablaydii nololna ku soo qabtan mid kale.
Balse weerarkaas waxaa kale oo ku nafwaayay labaatan ruux oo lahaysteyaashii ah iyo labo ka mid ah booliiska, dhacdadaas ayaana noqotay middii ugu xumayd ee dalkaasi ka dhacda taariikhda wadankaas.
Kooxda isku magacawday Dawladda Islaamka ayaa sheegatay masuuliyadda weerarkaas, balse dawladda ayaa meesha ka saartay waxayna sheegtay in ay ka dambeeyaan malayshiyo Islaamiyiin ah oo dalka gudihiisa ka jirta oo lagu magacaabo Jameecadda Mujaahidiinta ah ee Bangaladhesh oo loo soo gaabiyo (JBM) taas oo la mamnuucay.
Image caption Booliiska bangaladhesh